देउवा सरकारमा गगन थापाले मन्त्रीको अवसर नपाउने, कोको छन् सूचीमा ? | वर्णन मिडिया - सूचना तथा समाचारको संवाहक |
देउवा सरकारमा गगन थापाले मन्त्रीको अवसर नपाउने, कोको छन् सूचीमा ?
२०७८ श्रावण ७, बिहीबार ०४:३४:००
काठमाडौँ । सरकारको नेतृत्वकर्ता नेपाली कांग्रेसले पार्टीको तर्फबाट मन्त्री बन्नेहरुको प्रारम्भिक सूची तयार पारेको छ । महामन्त्री पूर्णबहादुर खड्कासहित कांग्रेसका नेताहरुको छलफलले मन्त्री बन्नेहरुको सूची तयार पारेको हो ।
प्रधानमन्त्री तथा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको समूहबाट देवेन्द्रराज कँडेल, पुष्पा भुसाल र किशोरसिंह राठौर मन्त्री बन्ने सम्भावना छ । त्यस्तै महामन्त्री सशांक कोइरालाको समूहबाट सञ्जयकुमार गौतम, रामचन्द्र पौडेलको समूहबाट राजन केसी र कृष्णप्रसाद सिटौलाको समूहबाट भीमसेनदास प्रधानको नाम तय भएको छ ।
देउवाले आफ्नो समूहबाट ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की र बालकृष्ण खाँडलाई मन्त्री बनाइसकेका छन् । खाँडलाई विजयकुमार गच्छदारको समेत प्रतिनिधित्व हुने गरी मन्त्रिपरिषदमा स्थान दिइएको हो ।सिटौला खेमाबाट भीमसेनदास मन्त्री बन्ने भएपछि गगन थापाको सम्भावना सम्भावना समाप्त भएको छ । पछिल्लो समय थापाले कित्ता परिवर्तन गरेको आशंकाका आधारमा सिटौलाले उनलाई मन्त्रीका लागि सिफारिस नगर्ने भएकाम हुन् ।
सिटौलाको समूहबाट थापा, प्रधान र उमाकान्त चौधरी प्रतिस्पर्धामा थिए । महाधिवेशन नजिकै आएको र करिब साढे तीन वर्षपछि पार्टी सत्तामा पुगेको कारण पनि सिटौलाले सबैभन्दा विश्वासिला पात्रका रुपमा प्रधानलाई छानेका हुन् ।
गठबन्धनको सरकार भएकाले कांग्रेसको भागमा ७ वटा मन्त्रालय पर्ने देखिएको छ । बाँकी मन्त्रालय माओवादी, एमालेको माधव नेपाल खेमा, जसपाका दुवै खेमा र जनमोर्चालाई भागबण्डा गर्नुपर्नेछ । माओवादी र नेपाल समूहले पाँच-पाँच मन्त्रालय पाउने भएका छन् ।